Kismaayo iyo Baydhabo oo ay gaareen wufuud baarlamaanka iyo xukuumada Soomaaliya ka socda. |
Kismaayo iyo Baydhabo oo ay gaareen wufuud baarlamaanka iyo xukuumada Soomaaliya ka socda.
Magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa waxaa maanta gaaray wafdi wasiirra ah oo kasocda xukuumada Soomaaliya iyada oo magaalada Baydhaba ee xarunta gobalka Baay ay gaareen wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya.
Wafdiga Gaaray Kismaayo oo ay kamid yihiin wasiirada arimaha gudaha iyo gaashaan-dhigga iyo wasiir ku-xigeenka wasaarada war-faafinta ayaa lafilayaa in ay lakulmaan maamulka Kumeel gaarha ah ee magaalada Kismaayo oo uu hor boodayo Axmed Madoobe, iyaga oo sidoo kale usii gogol xaaraya safar R/wasaare Saacid uu halkaasi ku tegayo maalinta Isniinta ah.
Dhanka kale, gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya, Maxamed Cusmaan Jawaari, ayaa isna waxa uu gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta goblka Baay, halkaasi oo ay kusoo dhaweeyeen xubna baarlamaan oo ay kamid yihiin gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, Aadan Madoobe.
Gudoomiyaha ayaa lafilayaa in uu kulan laqaato saraakiisha ciidamada Ethiopia ee ku sugan halkaasi si uu ugu adkeeyo sii joogitaankooda dalka Soomaaliya.